Garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulankii Juve-Milan oo loo hanjabey! – Gool FM
Garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulankii Juve-Milan oo loo hanjabey!
Raage March 21, 2017
(Roma) 21 Maarso 2017 – Waxaa lasoo werinayaa in garsoorihii dhex dhexaadinayay kulankii Juve vs Milan ee Davide Massa ay soo gaareen farriimo halis ah oo hanjabaad ah.
Kooxda Rossoneri ayaa 2-1 waxaa uga badisay kooxda reer Torino oo rigoore heshay daqiiqaddii ugu dambaysay kaasoo uu dhaliyay Paulo Dybala iyadoo uu ka dhashay muran weli socda kaddib markii ay soo baxday in gacanta Mattia De Sciglio aysan ahayn mid bareer ah oo ay kubaddu ku dhacday uun (ball to hand), taasoo keentay in garsooraha baalasha laga rifo oo calan wade looga dhigo ciyaar aan muhim ahayn kulamadii ugu dambeeyay.
Sida uu iminka qorayo La Stampa, Massa ayaa loosoo diray telefoon iyo warqad aan la aqoonin cidda soo dirtay oo loogu hanjabayo, wargayska ayaana qoraya in ay ka koobnaayeen xog faahfaahsan oo ku saabsan nolosha gaarka ah ee garsoorahan iyadoo ay booliisku si dhab ah oo dhow u baarayaan.
Sida la fahmi karo, booliisku sooma bandhigin waxyaabaha ku qoran warqadda ama telefoonka lagu yiri, balse waxaa la sheegayaa inay booliisku durba heleen asalka ay ka yimaaddeen, iyadoo lagu sameeynayo baaritaanno dheeraad ah oo lagu baarayo dhareerka lagu xirey warqadda si loo baaro DNA-da qofka.
Messi oo loo xiray maaliyado kala duwan oo kooxo waa wayn.... (Middee ayuu ku nuurayaa?) + SAWIRRO
Barcelona oo doon doonaysa Paolo Dybala & Juventus oo diiddan